မသမာမှူများလား (or) တွေ့ရကြုံရ အချိုးမကျတာလေးတွေ :P | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မသမာမှူများလား (or) တွေ့ရကြုံရ အချိုးမကျတာလေးတွေ :P
မသမာမှူများလား (or) တွေ့ရကြုံရ အချိုးမကျတာလေးတွေ :P
Posted by etone on Nov 9, 2010 in My Dear Diary |6comments
ဘော်ဒါတို့ရေ တွေ့ရကြုံရ အချိုးမကျတာလေးအကြောင်းပြောပြရဦးမယ် ။ မနေ့ကအီးတုံးတို့ ဦးလေး ကျောက်တံတားမြို့နယ် ရပ်ကွက်ကောင်စီရုံးကို ရောက်တယ် ။ သူများကိုရိုက်လို့… အဲမှားပီ … ကြိုတင်မဲပေးဖို့အတွက်ပါ … ။ သူက မဲပေးမဲ့နေ့မှာ မဲရုံမှာတာဝန်ကျမှာဆိုတော့ အသည်းကြားက မဲတပြားကို သိုသိုသိပ်သိပ်လေး သွားပေးပါသတဲ့…. လူတောမတိုးတဲ့ဦးလေး ဘေးမှာ ဆပ်ဆလူးနတ်ပူးသလို တဖြတ်ဖြတ်လူးနေတဲ့ … အဲ သွက်သွက်လပ်လပ်ရှိတဲ့ သူ့တူမလည်း ပါတယ်ပေါ့ ။ မဲရုံကိုရောက်သွားပါရော…. မှတ်ပုံတင်လေးကိုင်လို့ပေါ့ ။ အဲ့ဒီမှာ လူပေါင်း 12ယောက်လောက်က စားလိုက်သောက်လိုက် တဝေါဝေါရယ်လိုက်နဲ့ပေါ့ .. မှတ်ပုံတင်လေးကိုင်ပြီးသွားတဲ့ ဦးလေးက အာသွက်လျှာသွက်ဆိုတော့ ဘာမှမပြောပဲ နှုတ်ပိတ်လို့ မှတ်ပုံတင်လေးကိုင်ပြီး သူတို့ခုံနားမှာရပ်နေတာပေါ့ … အီးတုံးလေး ဦးလေးရဲ့ သွက်လက်ချက်ချာမှူကို ထောပနာပြုတဲ့အနေတဲ့ အီးတုံးကပဲ စိတ်မရှည်ပဲ နဂိုအသံထက်2ဆလောက်မြင့်ပြီး ပြောလိုက်တယ် ကြိုတင်မဲပေးချင်လို့လို့ ။
အီးတုံးရဲ့အသံကွဲအက်အက်ကြီး ဆုံးရော ၀ါးလုံးကွဲရယ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အကြည့်က တူရီးနှစ်ယောက်ဆီကိုရောက်လာတယ် ..အဲ့ဒီမှာ ခေါင်းလုပ်တဲ့လူကြီး… အဲ ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကြီးက ပေးလိုက်တဲ့ မဲစာရွက်ကလေ မဲရံမှူုးလက်မှတ်မပါဘူးတဲ့တော် … ။ ဒါနဲ့ အာလေးရှာလေးအီးတုံးတယောက် ဘာလို့မဲရုံမှူးလက်မှတ်မပါရလဲမေးတော့…နောက်မှထိုးမယ်တဲ့ ဟဲဟဲ သိတယ်မို့လား… ။ သိတယ်ဆိုရင်မပြောတော့ပါဘူး … ။
မပြောတော့ပါဘူးဆိုမှပြောချင်သေးတယ် ဒါနဲ့ပဲ …. ဦးလေးလည်း သူ့ဆန္ဒအတိုင်း ပေးခဲ့ပါတယ် ။ သေချာတာကတော့ … မဲရုံမူးလက်မှတ်မပါလို့ပဲ စိတ်ကြိုက်မတွေ့ရင် ပယ်မဲဖြစ်မလား … ။ တခြား …. ဘာညာညာများဖြစ်မလားဆိုတာ … ဘယ်သူမှ မမှန်းတတ်တော့ပါဘူး …
ဒီပို့စ်တင်ချင်နေတာ ကြာလှပြီ ကော်နက်ရှင်က အရူးလိုပဲဖြစ်ဖြစ်နေလို့ စာတွေသိပ်တင်လို့မကောင်းဖတ်လို့မကောင်းဖြစ်နေတာနဲ့ မတင်ဖြစ်တာ … အ ခုတော့လည်း ရွေးကောက်ပွဲပြီးတာပြီးတာပဲ တကယ့်အဖြစ်မှန်လေးလည်း ဘော်ဒါတို့ကိုပြောချင်တာနဲ့တင်ဖြစ်တာ။
မဲပေးတာ မသမာမှုကတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့……အဆုံးမှာတော့ ငိုပွဲသာ နွှဲခဲ့ရပါတယ် ဆိုတဲ့သီချင်းလိုပဲ…… ငိုပွဲသာနွှဲကြပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် အခုလည်းကြည့်လေ မြ၀တီမှာ စစ်ဖြစ်နေတာနဲ့ နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုပြီး အတည်ပြုမယ့်ရက်ကို အကန့်အသက်မရှိရွှေ့ဆိုင်းလိုက်တယ်ဗျို့………. ကုလားကြီးနဲ့ ဘာဘူကြီးပါဘဲဗျာ
သူတို့သိပ်ခံစားနေ နေကြပါလား!!!!!!!!!!!!!!!!
အဘရေ.. သားစဉ်မြေးဆက် အုပ်ချုပ်ဖို့သာပြင်ထားပေတော့။ လူတွေက ကိုယ့်စားရိတ်နဲ့ကိုယ် လာအလိမ်ခံကြတာ။ နောင်လေးနှစ်ကြလဲ နောင်ထပ်အလိမ်ခံမဲ့သူတွေ ပေါ်လာအုံးမယ်။